ट्रेलरमा ‘स्टाईलिस’ रोमियो, निशाको रोल के हो ? « Ramailo छ
ट्रेलरमा ‘स्टाईलिस’ रोमियो, निशाको रोल के हो ?
नायक हसनराजा खानको निर्माण तथा शिर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘रोमियो’को ट्रेलर स्टाईलिस बनेको छ । शंकर कार्की निर्देशित फिल्मको ट्रेलरमा रोमियो अर्थात् हसन, नायिका निशा अधिकारी, नव नाकिया ओसिमा बानु, अभिनेत्री मेलिना मानन्धर, कलाकार भानु प्रताप लगायत प्रस्तुत छन् । ट्रेलर हेर्नुस् :
कात्तिक २४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रोमियो’ को प्रोमो मा लभ रोमान्स, बिछोड र बदला झल्किन्छ । तारा प्रकाश लिम्बु, सुनिल सन्डे कुर्वान खान र योगेश काजीको संगीत रहेको छ भने द्धन्द्ध निर्देशन अष्ट महर्जजनको रहेको छ । रोमियो लाई किरन माईकलले लेखेका हुन् । फिल्म निर्माणमा हसनसँग आशिका श्रेष्ठ र विष्णु कार्कीले सहकार्य गरेका छन् ।